China LEDB260 LED karazana fandinihana jiro fandinihana ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy hopitaly | Wanyu
LEDB260 LED karazana fandinihana jiro fandinihana ho an'ny hopitaly
Ny andian-jiro fanadinana LED260 dia misy amin'ny fomba fametrahana telo, finday, valindrihana ary fametrahana rindrina.
LEDB260, ity anarana maodely ity dia manondro jiro fanadinana karazana rindrina.
Ny tranon'ny jiro dia vita amin'ny alimina alimika vaovao, izay mora mamoaka hafanana. Volavola feno mihidy, tsy misy visy. Misy takamoa 20 OSRAM amin'ny fitambarany. Ity jiro fanadinana ity dia hazavana fotsy mifangaro sy jiro mavo, manome hazavana hatramin'ny 80000 sy maripana miloko 4500K eo ho eo. Ny fonony dia azo disassembled sy sterilized. Fa ny haben'ny toerana tsy azo ahitsy.
Ny jiro fanadinana dia azo ampiasaina amin'ny ENT (Maso, Orona, Tenda), nify, mpitsabo aretim-behivavy, dermatolojika, fitsaboana amin'ny tarehy, fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana ary fandidiana madinidinika.
1. Safidy safidy hafa ho an'ny efitrano ambany valindrihana
Ho an'ny efitrano fanadinana voafetra ny habaka, ny jiro fanadinana mipetaka amin'ny rindrina dia safidy safidy tsara
Rafitra fanamafisam-peo matanjaka, samy manana ny masolavitra namboariny tena manokana, izay manome fampitana hazavana tena tsara sy fahaiza-mifantoka tsara, mahatonga ny antsipiriany ao amin'ny faritra maratra hiavaka kokoa.
3. Afangaro amin'ny takamoa Osramy fotsy sy mavo
Ny jiro dia misy loko roa, mavo sy fotsy. Aorian'ny fifangaroan'ny hazavana mavo sy ny jiro fotsy, dia nihatsara kokoa ny mari-pana amin'ny loko sy ny fandikana loko. Ity jiro fanadinana ity dia ampiasaina tsy amin'ny fizahana isan'andro fotsiny, fa amin'ny fiasa kely amin'ny ankapobeny.
4. Tanana roa famonoana otrikaretina
5. Panel fanaraha-maso intuitive
Famolavolana teboka telo, kilasika, fitomboan'ny hazavana, fihenan'ny hazavana. Ny hazavan'ny jiro fanadinana dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo.
6. Halavan'ny fanitsiana midadasika
Ny sandry lohataona mahaleo tena dia manome ny zoro mihetsika sy ny hetsiky ny hetsika.
Jiro fanadinana karazana rindrina LEDB260
Previous: LEDB200 LED Wall Walled Mounted Type Medical Examination Light ho an'ny toeram-pitsaboana veterinary
Manaraka: Jiro fiasa LEDB500 mitaingina rindrina miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
DD700 Ceiling Reflector miasa hazavana amin'ny Ca ...